Isitudiyo esimaphakathi kakhulu enkabeni, eduze "konke"
Lillehammer, Innlandet, i-Norway
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Knut
Ifulethi elilodwa lokulala elisenkabeni yedolobha lase-Lillehammer, elinendawo yokupaka yamahhala nemibhede emithathu (okungenzeka kube emine uma uyicela). I-Magnificent Søndre park kanye nomgwaqo obukekayo wabahamba ngezinyawo njengomakhelwane oseduze. Ifulethi lihlanganisa igumbi lokugezela elinokugeza, ikhishi elinezitsha zasekhishini, umenzi wekhofi kanye novulandi. Sibeka okokulala okusha phezu kwemibhede/umbhede wosofa bese sethula amathawula ahlanzekile kubavakashi bethu.
Izivakashi zethu zilahla yonke ifulethi zodwa.
Izisetshenziswa ezisekhishini yilezi: Iziqandisi ezimbili, isiqandisi, usinki, izitsha nezinto zokuwasha, ithawula lenkomishi, amathawula ephepha, ikhofi / itiye lamahhala, umenzi wekhofi, izitsha zabantu abangu-4 okuhlanganisa ukusika, ipuleti, ipuleti lesidlo sakusihlwa, indishi, ingilazi nekhofi. indebe. Imimese, i-cheese grater, isikele, ipani lokuthosa, ipani elincane, i-spatula kanye ne-water carafe.
Izinsiza endlini yokugezela yilezi: insipho yesandla, amathawula, indwangu, ijeli yokugeza, i-qtips kanye ne-doruller.
Umshini wokuwasha uyatholakala ekamelweni elihlukile elondolo endaweni engaphansi.
4.45(11 okushiwo abanye)
Ayitholi indawo emaphakathi. Noma kunjalo, leli fulethi livikelekile emsindweni wezimoto endaweni ethule. Umgwaqo wabahamba ngezinyawo ukude nje futhi ungamamitha angu-20 ukuya e-Søndre Park, amamitha angu-450 ukuya esiteshini se-shuttle sase-Lillehammer (isiteshi sebhasi nesitimela), amamitha angu-700 ukuya e-Maihaugen namamitha angu-1700 ukuya e-Olympic Park (Kristin-and Håkoshall).
Bor på Lillehammer. Jobber som murer.
Siyahlangana ukuze sinikeze okhiye. Lapho sekuphuma, isivakashi sibeka okhiye ebhokisini leposi elikhiyiwe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lillehammer namaphethelo